About Us - Funlandia
Turn-Kiyi Yekutamba Solution Provider
SeChina inotungamira yekugadzira nhandare yekutamba, Funlandia inopa mhinduro-kiyi yemukati yekutamba mhinduro kune vatengi vepasirese.Isu tinovhara iyo yese maitiro kubva kune yakadzama dhizaini kusvika pakugadzira uye kuisirwa, ichipa mhando yepamusoro uye inodhura yemukati yekutamba nhandare.
Chikwata chedu chepasirese chekugadzira chinoyedza kugadzira zvigadziriso zvemitambo yemukati memukati kuburikidza nekufungidzira dhizaini inobatanidza munzvimbo yemutengi.Iwo madhizaini anovavarira kugadzira nyowani "fusion" yekutamba chiitiko chinokunda zvipingamupinyi zvenzvimbo nedhizaini yedu inoshanduka yemidziyo yekutamba.
Chikwata chedu chekugadzira chine chinangwa chekuwedzera kutengesa uye kuvandudza ruzivo rwevatengi.Isu takagadzirisa akawanda emukati memhuri kutamba uye themed mapurojekiti ezvimbo kubva pa100㎡ kusvika 10000㎡.Yedu yakakura R&D uye kugona kugadzira kunovimbisa kutariswa uye kwakabudirira kuita kwemapurojekiti edu.
Isu tinosangana neakaomesesa ekuchengetedza zviyero muindastiri: iyo ASTM chiyero cheUSA uye EN chiyero cheEurope.Aya mazinga anoshanda segwara redhizaini yedu uye kugadzira maprotocol.Isu tinoshandisa zvemhando yepamusoro zvinhu uye tinoshandisa yazvino tekinoroji kuve nechokwadi chemhando yepamusoro yemidziyo yedu yenhandare.Mitsetse yedu yezvigadzirwa, iyo yakanyanya kuwanda muindastiri, inogara ichivandudzwa kuitira kuti vatengi vagone kuve neakanyanya kugadzira zvigadzirwa zvenguva iri mumaoko avo.
Parizvino, Funlandia ine vadyidzani mumakondinendi matanhatu uye vanopfuura vashandi mazana matatu muchigadzirwa chayo chepasi rose uye timu yebasa.Zvinopfuura 2000 zvepasi rose uye zvemuno mapurojekiti ekubatanidza emukati memukati akapedzwa zvinobudirira.
Kugadzira mutambo une musoro kumhuri
Takatanga basa reOEM remhando dzepasirese dzine mukurumbira
OEM nhanho yevatengi vepasirese: Kuburikidza neOEM kugadzirwa kweakawanda epasi rese ane mukurumbira evaraidzo uye enhandare yekutamba mabhureki emidziyo, isu takagona kuchengetedzwa kwepasirese zviyero zvemukati memba yekutamba dhizaini uye yepasirese yekutanga-kirasi yemhando yekugadzira maitiro.
Funlandia yakanyoreswa zviri pamutemo uye yakatanga kusimudzira mhando yemidziyo yemukati menhandare yekutamba kumusika wepasirese.
Funlandia's Shanghai Headquarters Yakagadzirwa
Nzvimbo yedu yekugadzira yeShanghai yakatangwa.Iyo inozivikanwa nekuchengetedzeka kwayo uye yemhando zviyero zvinosangana nekupfuura izvo zvekuNorth America neEurope, izvo zvakawana kuzivikanwa kuzere kubva kune vatengi muChina pamwe nekunze.
Funlandia yakava Yakanakisa Turn-Kiyi Yekutamba Solution Provider muInternational Marketplace
Yedu mhando inozivikanwa zvakanyanya mumusika wepasi rose uye yave imwe yemhando dzinotsvakwa neChina.
Funlandia yakatungamira maitiro ekuvandudza eChina yemukati memba yekutamba uye indasitiri yekunakidzwa
Funlandia yakatora chikamu muhuwandu hwezviratidziro zvepasirese uye yakaunza inotungamira yepasi rose mitambo yekunakidzwa "SKYMAZE" (inoshanduka 3D maze) uye "DROP -SLIDE" kuChina.
Funlandia's Suzhou Manufacturing and Development Center Yakavambwa
Yedu Suzhou yekugadzira nzvimbo yakavambwa ine huwandu hwevashandi vanopfuura mazana maviri uye nzvimbo yefekitori yakakura zvakakwana kubata inoyevedza 20,000 square metres.
Funlandia's Action Planet mhando yakavambwa kuti ikubatsire kutora nyika
Yedu "Action Planet" iri kutungamira maitiro matsva e "Sports Game Play," uye iri kuwana kutariswa kwakawanda!Vanhu vanoda yedu American-Style Family Entertainment Center.
Funlandia Yakatanga Strategic Cooperation neLeading International Brands
Takatanga kudyidzana kwakakura nevekuChina nevekunze FEC uye mabhureki emukati menhandare yekutamba kuti aonekwe seinjini yekutamba yemukati meimba uye mumiriri wemidziyo yemhando yepamusoro pamusika wepasi rose.
ThunderFox Dhizaini yakavambwa
Funlandia's full-owned dhizaini subsidiary "ThunderFox" yakavambwa kuti ipe vatengi zvigadzirwa uye sevhisi mhinduro kubva kune pfungwa kusvika pakuita.
Funlandia iri Kuvhura New Frontier muSports Play
Isu takatora "mitambo inonakidza pamwero mukuru" tikaiisa mumaoko evatengi vedu, nemapurojekiti anoshamisa ayo asina kungowana chitupa cheTÜV chete asi akatibatsirawo kugadzira kudyidzana.Isu takagadzirira zvino chero chipingamupinyi chinokandwa patiri!
- PRODUCT STANDARD -
— CHETENDERO STANDARD —
- VAMWE VEDU -